Guddiga Dastuurka ee la magacaabay ninna sababtiisa & sharciyaddiisa ma garan! | Waayaha
You are here: Home 2014 May Guddiga Dastuurka ee la magacaabay ninna sababtiisa & sharciyaddiisa ma garan!
Posted on May 31, 2014 by Ayuub Xudayfi | 0 Comments
Puntland way baryootameysaa
Waqtigii koobnaa ee 4-ta bilood ku sinnaa ee Dowladda Puntland ay jirtay waxaa mar walba dhagaheenu maqlayeen hadallo soo jiidasho u badnaa, marar bandanna lagu celceliyay kuwaas oo u muuqday in Puntland aad u danayneyso sidii ay mar isu arki lahaayeen Dowladda Federaalka (DF) ee Soomaaliya ee uu madaxda ka yahay Xasan Sh Max’ud.
Hadaladaa Puntland ka soo yeerayay oo marwalba dhagaha Dowladda ku dhacayay wax jawaab ah ama garowshiyo ah lagama bixin, xitaa “waad mahadsan tihiin ama warkiinu waa na soo gaaray” wax dhan bay u ahaan laheyd Puntland.
Waqtiyadii hore sheekadu waxay ku ekeyd su’aal & Jawaab, oo haddiiba Madaxda Puntland idaacaduhu weydiiyaan xiriirka iyaga & DF kala dhaxeeyay waxay sheegi jireen in labada dhinacba wax uga xumaanayaan!. Waxaa noo xigtay dowladda GAAS oo shaacisay in guddi arrintaas baara loo saaray. Maalmo dabadeed waxaan maqalnay R/wasaare C/weli ayaa Garoowe booqan doona, shir ayaa Garoowe ka dhici doona weliba magacyo loo sii bixiyay Garoowe-3 & Garoowe-4 (cidda faafineysa la garan waa!). Maanta waxay mareysaa Dastuurkii ay Puntland dagaalkii la ogaa u gashay in Dowladda Federaalku ay iskeed sidii ay doonto ka yeesho oo dad ay iyadu ku kalsoon tahay u soo xulato.
Wadahadal dhex mara Puntland & DF, Puntland iyadaa marwalba wax iska isweydiineysay iyadaana isaga jawaabeysay, taas oo u muuqaneysay in hal dhinac wadahadalka aad u daneynayay (unilateral). Aan tusaale u soo qaato mid ka mid ah hadaladii Puntland ee ku saabsanaa in Puntland ay magacowday Guddi ka shaqeeya khilaafka Puntland & DF. Markaad qodobkaa maqashay su’aalaha maskaxdaada kusoo dhci karay waxaa ka mid ah: in guddi lamagacaabo sow kama horreyso in la isku soo qaado? Ma ergey dhexdhexaadiya labada dhinac ayaa la magacaabay? Ma Dowladda Federaalka ayaa cabashadii Puntland jawaab ka bixisay? Ma cadaadis dibadda uga yimid baa Puntland mise iyadaa iska jecleysatay? Dabcan intaas oo jeer Puntland iyadaa marwalba wax is-weydiineysay iyadaana isaga jawaabeysay, oo cid kale oo arrintan ka hadleysa, daneyneysa ama la waday ogaankay ma jirin. Aniguna mar walba oo ay Puntland afka kala furto waxay iila muuqaneysay mid baryootameysa.
Muxuu ku saleysnaa murankii Puntland & Dowladda Federaalka ka dhaxeeyay?.
Arrimaha ay Puntland & Dowladda Federlaaku isku hayeen wey badnaayeen laakiin labo qeybood ayaa ugu waaweynaa, weliba midda hore waxay Puntland u aragtay lama taabtaan. Arrinta hore waxay ahaayeen qodobo dastuuri ah oo 22 qodob ka badnaa kuwaas oo dastuurka laga saaray, lagana tirtiray; waxaana ka mid ahaa go’aamada siyaasadeed, hantida dalka & dadka, awoodaha, dhismaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka, dhismaha Maamul-goboleedyada & xuduudahooda, caasumadda iwm. Arrinta labaadna waxay ku saabsanaayeen awood-qeybsiga Dowladda Dhexe & Maamulada, kuwaas oo iyagana ay dowladda dhexe ku takri-fashay. Waxaa iyagana ka mid ahaa Jagooyinka Dowladda, Dhaqaalaha, Waxbarashada, Caafimaadka iwm. Ogoow kuwan laftigooda dastuurka ayaa Puntland u oggolaanayay in ay waxa ay xaqa u leedahay laga siiyo laakiin maxaaba la isku soo qaadaa kuwii ka waaweynaa ayay Dowladda Dhexe sidii ay doonto ka yeeshay.
Ninba si buu garta u yaqaane, intii muranka Dastuurku soo jiitamayay, waxaan sugayay goorta Puntland & Dowladda Federaalka loo kala dabqaadi doono, dabadeed la isa soo hor-fariisan doono. Goorta dowladda Federaalka ka gaaraabi doonto khaladaadkii ay gashay. Maalinba maalinta ka dambeysa niyaddeenu wey sii xumaanayesay illaa laga soo gaaro arrinta hadda nagu cusub oo quus nasii gelisay.
Waxaan filayay in Puntland ay xisaabtan adag oo xagga Dastuurka ah ay Dowladda Federaalka la geli doonto. Waxaan filayay in dad aqoon u leh Arrimaha Dastuurka ay Puntland u dirsan doonto. Waxaan filayay in guddiga dib-u-eegista ay labada qolo wada magacaabi doonaan. Waxaan filayay wax lawada leeyahay halkaa laga hirgelin doono. Mar walba oo aan wax is-weydiiyo xusuusteydu kama marneyn aqoonyahanadii Dastuurka Puntland dhidibada u taagay ee uu ka midka ahaa AUN Prof. Cabdi Xasan Jimcaale, shaqadii ay qabteen, juhdigii & waqtigii ay geliyeen iyo sida maanta loogu badalay.
Maxaa ii soo baxay?
Waxaan dareemayaa in dowladda Puntland ee hadda jirtaa tahay mid taladeedu aad u jilcsan tahay. Waxaan dareemayaa in awoodda iyo maqaamka Puntland ay Soomaaliya gudaheeda ku laheyd ay hoos u sii dhacayso. Waxaan dareemayaa in siyaasaddii Puntland lagu yiqiinay meesha ka sii baxeyso. Waxaan dareemayaa in xukuumadda Puntland & Dowladda dhexe ay hoos ka wada xiriirsan yihiin. Waxaan sii dareemayaa in dalku Koonfur & Woqooyi ku soo wada ururi doono.
Ha u qaadan in aan Puntland siyaasadeeda iska weerarayo, laakiin si aad ii garato su’aalahan jawaabahooda ii hel.
1) Sharciyan yey tahay cidda xaqa u leh in ay magacaabaan guddiga dib-u-eegista Dastuurka marka ay noqoto Dowladda Dhexe? Ma Golaha Wasiiradaa? Ma Madaxweynahaa? Mise Golaha Baarlamaankaa?
2) Puntland ma dirsatay dad sharci-yaqaanno ah oo doodaha sharciyada wax ka oran kara? Baarlamaankeedu wax maka ogyahay? Wasiirkeedii Dastuurka hadal maka heysaan?
3) Xaggee ka maqashay xubnaha Puntland ee guddiga ku jira? Ma Garoowe mise Muqdisho?
Puntland Shalay & Maanta
Shalay Puntland waxay aheyd dowlad ballaaran oo dhul, dad & dhaqaale ku filan heysata, waxay caalamka & soomaalidaba tuseen in ay yihiin dad wax qabsanaya diyaarna u ah in ay horumar gaaraan, waxay meesha ka saareen ereyga Woqooyi & Koonfur, iyagoo kusoo kordhiyay dowlad saddexaad, waxay u qalab-qaateen dhisidda maamuladii kale ee Federaalka, waxaan ogeyn Puntland oo ka hormarsan Dowladda Federaalka & Maamulada kale, waxaan arki jirnay Puntland oo xubin muhiim ah ka ah shirarka caalamiga, waxaan ogeyn magaca Puntand oo dadkii aan aqoon & kuwaan aqooninba la baray. Waxa isbedelay ee Puntland maanta heerka ay mareyso gaarsiiyay anigu ma garan.
Muxuu yahay xalku marka?
La yaab iguma noqon waxa hadda socda, in ay soo socdaana qof walba oo caqli leh waa garanayay, haddana qof waliba shibtiisuu guray, oo malaha dowladda Puntland oo cusbeyd & shaki badan oo dadka qaarkii qabeen ayaa qof waliba is yiri u yara kaadi inta dowladdan ka dhaqaaqeyso, taana garowshiyo ayay laheyd. Laakiin markan sheekadu Alamtara soo dhaaftay, waxa laga hadlayaa waa masiirkii ummadda Puntland, qof walba oo reer Puntland ahna xil baa ka saaran ilaalinta xuquuqda dadkooda, waxaan oran lahaa SAX & KHALAD wuxuu doono hadhow ha noqdee waa lama huraan in aad arrintan ka hadashaan, weliba dadka awoodda u leh in ay ka hadlaan sida Madaxda & Aqoonyahanka Puntland, ama hadhow cidna ha eersanina.
Aragtida qoraha ayay gaar u tahay.
Farah M Warsame